ဖတ်နေရင်း မျက်ရည်ကျမိတယ်.. စေတနာ တူသောအကျိုးပေးပါစေ - Tameelay
ဖတ်နေရင်း မျက်ရည်ကျမိတယ်.. စေတနာ တူသောအကျိုးပေးပါစေ
ဧရာဝတီ တိုင်းသားတယောက်နဲ့ပါ တဲ့
လိပ်ကြ နဲ့မန္တလေးက သိတ်မဝေးလှပါဘူး
ငွေ ၃၀၀၀၀ ကျပ်ကို
ကျမရဲ့ Fri တွေကိုအမျှဝေပါတယ်
ကောသလ အိပ်မက် ၁၆ချက်
ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်မှာ ကောသလမင်းကြီးက အိပ်မက် ၁၆ချက် မက်တော့ ဘုရားရှင်ထံ မေးမြန်းရာ ဘုရားရှင်က ပြန်လည်ဖြေကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အချက် ၁၆ချက်က နောင်အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုဆိုရင် အချို့ အချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ ဆိုနိုင်နေပါတယ်။ အဆိုပါ ၁၆ ချက်ကတော့ . …
လှည်းတန်းစင်တာရှေ့မှာ နှမချင်းမစာနာ ကျွတ်​ကျွတ်​အိတ်​ဘန်းပြပြီး ကောင်မလေးကို လက်သရမ်းနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ပျံ့နှံ့
လှည်းတန်းစင်တာရှေ့မှာ နှမချင်းမစာနာ ကျွတ်​ကျွတ်​အိတ်​ဘန်းပြပြီး ကောင်မလေးကို လက်သရမ်းနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ပျံ့နှံ့ အကျီင်္အဖြူ နဲ့​ကောင်​ တဏှာရူး​နေတာ​တွေ့လား နှမ သားချင်းမစာနာဘူး ကျွတ်​ကျွတ်​အိတ်​ဘန်းပြပြီး ဖင်​နိုက်​​နေတာ ​ကောင်​မ​လေး​တွေကရှက်​ပြီးဘယ်​​ပြောရဲပါ့မလဲ လှည်းတန်းစင်တာရှေ့ ဟန်ထူးဈာန်သီချင်း DVD အခွေ မိတ်ဆက်​ပွဲမှာပါ အဲ့နှာဘူးကို ဝိုင်းရိုက်​ပြစ်​ရမှာ သူ့အခွက်​ကို လူတကာသိ​အောင်​ ရှယ်​​ပေးလိုက်​ကြပါအုံး …
တချို့ မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားရင် ဘာကြောင့်ပိုလှလာတာလဲ
စာချစ်သူတို့ရေ…. စာချစ်သူတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်း အရင်ကထက်ပိုလှလာတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို တွေ့ဖူးလား။ လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အသားအရေတွေစိုပြည်လာပြီး တောက်ပလာတာကိုလည်း သတိထားမိလား။ တချို့မိန်းကလေးတွေဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ပိုပိုလှလာတာကို အချစ်ရဲ့တန်ခိုးကြောင့်လို့ အားလုံးက ယေဘုယျသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ တကယ်တော့ တချို့မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်ကျပြီး ပိုလှလာတယ်ဆိုတာ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကြောင့်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် …